Fisaorana avy amin’ny mpitandrina Randrianarisoa Alain, pentekosta 2020 – FJKM Ambavahadimitafo Fisaorana avy amin’ny mpitandrina Randrianarisoa Alain, pentekosta 2020 |
Fisaorana avy amin’ny mpitandrina Randrianarisoa Alain, pentekosta 2020
Ezaka trano fidiovana.Randrianarisoa Alain.Vaovaom-piangonana
Publié le 05 juin 2020 à 06:06
Trano fidiovana vaovao FJKM Ambavahadimitafo, jona 2020
Ambavahadimitafo, 4 jona 2020
Ho an’ny mpianakavy ao amin’ny finoana rehetra.
Antony : Fisaorana
Ry havana, ho aminareo anie ny fahasoavan’i Jesoa Kristy Tompontsika. Isaorana Andriamanitra ary ankasitrahana isika rehetra tamin’ny vavaka sy Rakitra manokana tamin’ny alahady Pentekosta 31 mey 2020 teo.
Toy izao ny dinidinika tsara ho fantatra momba ny trano fidiovana :
– Anjaran’ny Fiangonana : 39Millions Ariary
– Vola voaloa hatreto : 29Millions Ariary
– Ezaka miandry antsika sisa : 10Millions Ariary
Misaotra antsika efa nandray anjara, ary manentana antsika mbola tsy nahavita na mbola handray anjara hanao araka izany am-pifaliana araka ny fitarihan’ny Fanahy Masina.
Tsarovy fa miankina amin’ny fahavitan’ny asa ny hitoeran’ny fahadiovana sy fahamasinana eo amin’ny Fiangonan’Andriamanitra.
Fehiny : Ny fotodrafitr’asa sy teknika dia efa vita fa ny ezaka ara-bola 10Millions Ariary sisa no andrasan’ny Tompo amintsika.
Manao veloma amin’ny anaran’i Jesoa Tompo ary mirary ny fiadanany ho amintsika.
Ny Mpitandrina, Alain RANDRIANARISOA